Surya Thulung Biography | Hamro Kalakar
Biography last updated: 8th Sep, 2017
Facts of Surya Thulung
Kalpana Ko Gagan
* This profile has not been verified by respective Kalakar.
Contact Surya Thulung
Suggestion for Surya Thulung
Surya Thulung is Director, Singer. He was born on 27th June in Illam. His horoscope is Cancer. His marital status is Married. His height is5feet7inches. His favorite color is Blue, favorite movie is Old Nepali Movies, favorite music is Kalpana Ko Gagan, favorite place is Illam.
१२ वर्षे कलिलो उमेर देखि नै सूर्य थुलुङलाई गीतले तान्थ्यो । नारायण गोपाल, कुमार सुब्बाका गीत बज्दा उनी सपनाको वायुपंखी घोडामा उड्थे । सोच्थे— म पनि यसैगरी एकदिन गीत गाउँछु ।
उनकै गीत हो ‘माछी मार न हो’ ।
उनी सानैदेखि गीत गाउँथें । इलाममा सबैजसो मान्छे भारतको अलइन्डिया, खर्साङ, सिलाङलगायत रेडियो सुन्थे । रेडियो नेपालमा नारायण गोपाल, गोपाल योञ्जन, कुमार सुब्बा, तारादेवीका गीत बज्थे । उनी तिनै गीत गाउँथे ।
इलामको श्रीवुंगमा जन्मिएका थुलुङलाई ‘भाग्य’ले पनि साथ दियो । संगीतको राजधानी मानिने दार्जिलिङ उनको घरबाट धेरै टाढा थिएन । दार्जिलिङको ‘इन्द्रेणी रेकर्डस्’ले रेकर्ड गर्ने सबैजसो छिनमै गीत इलाम आइपुग्थे । ती गीत सुन्ने सुरुवाती स्रोतामा थुलुङ सधैं परे ।
स्वर परीक्षासँग उनको रमाइलो सम्झना जोडिएको छ । ०३३ मा नारायण गोपालको ‘ईश्वर तैले रचेर फेरि’सँगै ‘मन्दिरमा गएर खाएको कसम’, ‘मेरो गीत मेरो प्रतिविम्ब होइन’ लगायत गीत गाएर स्वर परीक्षा पास त गरे तर एक वर्षसम्म रेकर्डको पालो पाएनन् । नियम थियो— एक वर्षसम्म रेकर्ड नभए स्वतः रद्द हुने ।
उनी जे नहोस् भन्ने चाहन्थे त्यही भइदियो । मेरो पालो नआएपछि स्वर परीक्षा रद्द भयो । मैले फेरि अर्को वर्ष स्वर परीक्षा दिएँ । पास पनि भएँ तर नियतिले फेरि उही खेल खेल्यो । गीत गाउनकै लागि इलामबाट जागिर सरुवा मिलाएर काठमाडौं आएँ तर सधैं झुलाइरहे । एकदिन रेडियो नेपाल गएर डाङडुङ गरेपछि बल्ल रेकर्ड गर्ने पालो आयो ।”
स्थानीय स्टेज कार्यक्रममा गीत गाइरहेका बेला काठमाडौंबाट इलाम पुगेका विक्रम सुब्बा, मञ्जुल, रामेशले थुलुङलाई रेडियो नेपाल जान सुझाएका थिए । त्यसबेलाका लोकप्रिय सांगीतिज्ञले नै गीत गाउन आग्रह गरेपछि खानेपानीमा जागिर खाइरहेका थुलुङलाई त्यहाँका हाकिम मनकांक्षा नेपालीले काठमाडौं पानीपोखरीस्थित खानेपानी विभागमा सरुवा मिलाइदिए । उनैले थुलुङलाई संगीतका धरोहर गणेश रसिकसँग परिचय गराइदिए, जसले उनलाई स्वर परीक्षा दिन सहयोग गरे ।
त्यतिबेला गीत गाउनु चानचुने कुरा थिएन । हजारौंको भीडमा स्वर परीक्षा दिएर पास गर्नुपथ्र्यो । स्वर परीक्षा पास गर्नु आफैंमा युद्ध जितेझै हुन्थ्यो । त्यस्तो परिस्थिति झेलेर आएका थुलुङलाई स्वर परीक्षा पास गर्नुभन्दा गीत रेकर्ड गर्न र त्योभन्दा पनि बढी गीत सुन्न सकस भयो ।
“०३४ तिर रेडियो नेपालमा ‘मन्दिरमा गई खाएको कसम’ गीत गाएको थिएँ । त्यो बेला रेडियो नेपालमा लोकमणि सापकोटा उद्घोषक हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई फोन गरेर ‘तपाईंले गीत गाउनुभएको रहेछ, भोलि दिउँसो १ बजेपछि बज्छ भन्नुभयो,” थुलुङले सम्झिए, “शनिबारको दिन थियो । बागबजार बस्थें । सबै साथीलाई खबर गरें, उनीहरुले एकै ठाउँमा बसेर सुन्ने भने । सबै भेला भएर रेडियोछेउ झुम्मियौं । लोकमणिले ‘अब सुन्न सक्नुहुनेछ गायक सूर्य थुलुङको स्वरमा गीत’ भने । यति सुनिसक्दा मेरो जिउ पसिनाले भिज्यो । अप्ठ्यारो महसुस भयो । मैले केही थाहै पाइनँ । गीत सुरु भएको मात्रै सम्झिन्छु, त्यसपछि अँध्यारो छाएजस्तो लाग्छ । यति हतास कहिल्यै भएको थिइनँ ।”
यो घटनापछि दशक बिते । प्रविधिले फड्को मा¥यो । गीत रेकर्ड ‘आकाशको फल’ भएन । कला र पैसा भए छिनमै गीत रेकर्ड हुन थाले । यससँगै हजारौं नयाँ कलाकार जन्मिए ।
खुलुङ यसलाई ठूलो फड्को मान्छन् ।
नेपालमा गीत बुझ्ने र मन पराउनेको संख्या जानु कलाकारका लागि सकारात्मक भए पनि यसले कलाकारलाई नै मारेको दुःख उनलाई छ । “किनेर सुन्न छाडे,” भन्छन्, “जबसम्म पैसा तिरेर गीत सुनिँदैन, तबसम्म कलाकार मरिरहन्छन् । एक मुठा सागभन्दा पनि सस्तो भयो, नेपाली संगीतका लागि यो कालो युग हो ।”
यसमा उनी सरकारको दोष देख्छन् । रोयल्टी र कपिराइटमा सरकार मौन हुँदा कलाकारले मूल्य चुकाइरहेको गुनासो उनी गर्छन् । “मैले ०३३ सालमा एउटा गीत गाएको ३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे । अहिले परिमाणमा धेरै देखिएला तर त्यो अहिलेको मूल्यमा गौण हो ।”
कलाकारले गीत–संगीतमा गरेको लगानीबाट प्रतिफल नपाएसम्म गुणस्तरको आश गर्न नसकिने उनी बताउँछन् ।
Surya Thulung Photo Gallery
Surya Thulung Videos
✓ Santosh Panta
✓ Pratap Das